ယောကျ်ားပီသတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ | Radio Veritas Asia
Teach man hood
ဒီနေ့မှာ ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက် အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာ ယောကျ်ားဂုဏ်ရည် စွမ်းပကား (သို့) ယောကျ်ားပီသတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်တွေကနေ ဘယ်လို ညွှန်ကြားသင်ပေးသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်း တင်ပြပေးသွားချင်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်ဆိုရင် ကြီးငယ်မရွေး ကြည့်ကြတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အက်ရှင် ဇာတ်မျိုးဆို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားကြတာ ယောကျ်ားလေးတွေ အကြိုက်ပေါ့။
အဲဒီလို ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာဟာဖြင့် ၃၊ ၄၊ ၅ နှစ် ကလေးငယ်အတွက် ဘယ်လို message တွေပေးနိုင်မလဲ? ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကို ဘယ်လို စိမ့်ဝင်သွားစေသလဲ?
ယောကျ်ားပီသတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ မိဘတွေ အထူးသဖြင့် ဖခင်က သင်ပေးတဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီတော့ သင်ကိုသင်ပေးရမှာ မိဘတာဝန်ပါပဲ။ boys will be boys မိခင်ကနေ မွေးဖွား လာတာ ယောကျ်ားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် သူအရွယ်ရောက်လာရင်လည်း ယောကျ်ားလေးပဲ ဖြစ်ရမှာပါ။
ဒါကြောင့် ကလေးဘဝမှာကတည်းက action ကားတွေ ကျားကျားလျားလျား သရုပ်ဆောင် တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ပေးကြည့်ရအောင်ပါ။
ဥပမာ- Jame Bond ရုပ်ရှင်ကားတွေလိုမျိုး male hero ယောကျ်ားတစ်ယောက်ရဲ့ စွမ်းရည် ကို ထုတ်သုံးပြသတဲ့ ရုပ်ရှင်မျိုး၊ starwar လို ရုပ်ရှင်ကားမျိုး၊ သိပ္ပံပညာရဲ့ အံ့မခန်းတဲ့ ပညာရပ်တွေ ရဲ့ သရုပ်သဏ္ဍာန်တွေနဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားမျိုးတွေကို မြင်တွေ့ကြည့်ရှုရတဲ့ ယောကျ်ား လေးတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လို message တွေ ရသွားစေသလဲ။ ယောကျ်ားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကို ဘာတွေက စိမ့်ဝင်သွားစေသလဲ။
ဖခင်အနေနဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးတွေ ပါဝင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားမျိုးကို ပေး ကြည့်စေတဲ့အခါမှာ ဒီ ၃၊ ၄၊ ၅ နှစ်ယောကျ်ားလေးကလည်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အပြုအမူ လက္ခဏာတွေပဲ မြင်တွေ့လာရပါတယ်။
ဒါကြောင့် quality movie အဆင့်ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားမျိုးတွေ ပေးကြည့်စေတာ မကောင်းဘူး လား။ ယောကျ်ား သူရဲကောင်း ရုပ်ရှင်မျိုးကြည့်တော့ boy power ကို ရစေပါတယ်။ ဒီယောကျ်ား လေးက ရုပ်ရှင်ထဲကလို သူ့ဘဝမှာ တစ်ယောက်ထဲ သတိ္တရှိရှိ ပြန်ခုခံရမယ်။ go out and fight alone ပေါ့။ လောကကြီးထဲကို ဝင်ပြီး တစ်ယောက်ထဲ ဘယ်လို ခုခံရမယ်။ မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ် စတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ ရလာမှာ မလွဲပါဘူး။
ယောကျ်ားလေးဆိုတာ ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်နိုင်ရမယ်။ အဲဒီလို ရေွးချယ်နိုင်ဖို့ ဖခင်အနေနဲ့ ဟပေးထားရပါမယ်။ ဒါမှသာ သူ့စိတ်ကူးနဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချပြီး ယောကျ်ားပီသတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချတတ်လာမှာပါ။ boys just be boys ဒါက ဖခင်တစ်ယောက် မြေတောင်မြှောက်ပေးရမယ့် နည်း တည်ဆောက်ပေးရမယ့် နည်းတွေပါပဲ။
အဲဒီလိုမှ မတည်ဆောက်ပေးခဲ့ရတဲ့ ဒီယောကျ်ားလေး ကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ စောက်ထိုးမိုးမျှော်တွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ turning upside down ပေါ့။
ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သားတစ်ယောက်ရဲ့ model အဖြစ် ပြုမူနေထိုင်ရပါအုံးမယ်။ ဇနီးသည်ကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာ ရိုက်နှက်တာ သားရှေ့မှာ မူးယစ်ဆေးသုံးတာတို့ အရက် အလွန် အကျွံသောက်ပြီး မူးပြီး ရမ်းကားတာတို့ တွေကို မြင်တွေ့ရတဲ့ သားဟာ တစ်နေ့နေ့ တချိန်ချိန် သူ အဲဒီလို ပြုမူလိမ့်မယ်လို့ တစ်ထစ်ချယူဆလို့ မရပေမယ့် ဆင်ခြင်ရမှာပါ။ ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ယောကျ်ား၏ ယောကျ်ားမှန် ကျန်အင်လက္ခဏာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ယောကျ်ားဂုဏ်ရည်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့သူ သူတပါးက ယုံကြည်လို့ရတဲ့သူ ဇနီးမယားက ယုံကြည်အားထားလို့ရတဲ့ သူ့အိမ်ထောင်ကို ယောကျ်ားစွမ်းရည်တွေ တည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတွေက သားတွေအတွက် model ပါပဲ။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေဆိုတာ ကလေးတွေရဲ့ အာရုံစိုက်ရာ အချက်အချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် quality movies တွေကို ပေးကြည့်စေတာဟာဖြင့် အသက် ၃၊ ၄၊ ၅ နှစ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာ မိမိကိုယ်မိမိ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်။ တပါးသူကို ကူညီ တတ်တဲ့သူ တခြားသူတွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သာလွန်တဲ့သူ to help other people, to beabetter people ဖြစ်လာနိုင်မှာပါဆိုတာကို တင်ပြရင်း ငယ်စဉ်မှာကတည်းက သူတို့ဦးနှောက်ထဲ စိမ့်ဝင်အောင် ကြိုးစားကြပါစို့။